အသေးစားလယ်ယာမြေများအတွက်အသေးစားစိုက်ခင်းများအတွက်ဆည်မြောင်းစနစ်သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောဆည်မြောင်းစနစ်အားလယ်ယာမြေအတွက်သင့်လျော်သည်, အားကစားကွင်း,ဂေါက်ကွင်း,ဘောလုံးကွင်း, မြက်ခင်းပြင်, မြက်ခင်း, ပန်းခြံများ, ဥယျာဉ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောသီးနှံများဖြစ်သည်။ ဤစီးရီးများမှာအဓိကအားဖြင့်ဥယျာဉ်နှင့်လယ်ယာမြေများအတွက်အသုံးပြုသောရေလောင်းကိရိယာများဖြစ်သည်,လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းစနစ်ကတည်ငြိမ်တဲ့ပိုက် reel ရှိပါတယ်,pipe drum သည်အထူးသဖြင့် torsion ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော profile များနှင့် segments များတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်.
1.ဆည်မြောင်းစက်ကိုအဓိကအားဖြင့် Frame ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, Reel,PE Tube, ရေတာဘိုင်,ဂီယာအုံနှင့်ရေ
2.ရိုးရှင်းသောနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ, လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့်ရွေ့လျား, ဆည်မြောင်း
စက်အားဖြင့် operated နိုင်ပါသည် 1-2 လူပုဂ္ဂိုလ်များ.
4.ကောင်းမွန်သောဆည်မြောင်းအရည်အသွေးနှင့်တူညီမှုကိုရရှိနိုင်သည် 85% အထက်.
5.ဆည်မြောင်းစက်, Multi-functions များနှင့်အတူ, လယ်ယာမြေဆည်မြောင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်, အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်
နှင့်ဆိပ်ကမ်းကို de- ဖုန်မှုန့်
1. လယ်ပြင်၏အဆုံးပေါ်ရေပိုက် reel ဆည်မြောင်းစက်ထားပါ.
2. PE ပိုက်နှင့်ရေဖျန်းကားကိုလယ်ကွင်းအခြားသို့လယ်ထွန်စက်ဖြင့်ဆွဲပါ.
3. ရေအချို့သောအလုပ်လုပ်ဖိအားရောက်ရှိသည့်အခါ, ပက်ဖြန်းသေနတ်သို့မဟုတ် cantilever ဖြန်းစတင်သည်. ဤအတောအတွင်း, ရေတာဘိုင်မှတဆင့်ရေဖိအားကိုအသုံးပြုပြီးအဓိကစက်, ဂီနီသေတ္တာနှင့်အခြားသောစက်စွမ်းအားထုတ်လုပ်သည့်အခြားမောင်းနှင်မှုစနစ်သည်ထိုဒြပ်ဆွဲအားမောင်းနှင်သည်.
4. လေမှုတ်စက်သည်ဒီဇိုင်းအမြန်နှုန်းဖြင့်ပြန်လည်ရွေ့လျားသောအခါ reel လည်ပတ်သောအခါ, ဆည်မြောင်းပြီးစီးသည်အထိလမ်းလျှောက်နေစဉ်ဖြန်း.
5. ဘယ်အချိန်မှာဖျန်းကားကိုအဓိကစက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေး, ဒါကြောင့်ရုပ်သိမ်းနှင့်အဓိကစက်သို့ fixed နိုင်ပါတယ်.
6. ရေအရင်းအမြစ်ဖြတ်တောက်, နှင့်အခြားလယ်ပြင်သို့လှုံ့ဆော်ပေး & ဆည်မြောင်းပြန်လည်စတင်ရန်.